10 Trips Day By Train From Florence | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Trips Day By Train From Florence
10 Trips Day By Train From Florence
(Last Nohavaozina: 28/08/2021)
Florence dia mahagaga toerana andry sy misy taonina hanao. fa, raha mitady ny barotra mihoatra noho izany renivohitra, efa nahazo anao voasarona. Misy ny sasany ny fitsidihana toerana mahagaga izay fotsiny ihany mitaingina fiaran-dalamby niala Florence. Eto dia 10 Trips Day By Train From Florence ho anareo mankafy!
Rail Transport tontolo iainana no tena lalana mankany Friendly Travel and faha-ny lahatsoratra nosoratana ny finiavana hampianatra momba ny Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
1. Trips Day By Train From Florence: Pisa
Pisa dia ao amin'ny ankamaroan'ny lisitry ny siny mpivahiny noho ny lazany mirona Tower, Katedraly Santa Maria Assunta, sy tranonkala hafa mahatalanjona. Fa ny tanàna mihitsy, ny sakany, ary mizarazara ny Arno River, Mendrika ny andro lavitra amin'ny fotoany avy izy! There are a good number of tranombakoka kely izay hijery, ary koa zaridaina. Ny Blu Palazzo monographic fampirantiana ihany koa ny manana ny zava-dehibe maoderina mpanakanto (Chagall, Miro, ary farany indrindra Toulouse Lautrec). Ary no Mpandinika ny sary an-drindrina farany indrindra nataon'ny Keith Haring, antsoina hoe Tuttomondo.
Mety ho antenaina mandeha eo amin'ny diany. Noho izany, tsarovy fa raha claustrophobic na matahotra avo nihanika ny mirona Tower feo mety tsy manintona anao, nefa dia tena mendrika ny mahita!
Livorno ny Pisa Lamasinina
Lucca ho Pisa Lamasinina
Arezzo ny Pisa Lamasinina
Ny iray amin'ireo andro malaza indrindra Trips avy Florence By Lamasinina dia ny Siena. Tsy nalaza noho ny Palio, izay ny soavaly hazakazaka fa mihazakazaka amin'ny alalan'ny koa malaza Piazza del Campo. Izany ihany koa fantatra amin'ny tsara tarehy Moyen Âge trano anivon'ny zavatra hafa. Siena dia an tanàna taloha feno Izao tontolo izao UNESCO lova toerana ary dia mendrika ny fitsidihana!
3. Trips Day By Train From Florence: Livorno
Izany no iray amin'ireo andro tonga lafatra indrindra Trips By Train From Florence ho an'ireo izay maniry na ny morontsiraka sy ny tanàna. Tsy toy ny tantara, na ara-kolontsaina hafa Tuscan tanàna. Na izany aza, dia iray amin'ireo Italia ny ala nenina tanàna amoron-dranomasina nentim-paharazana. Izany no toerana tsara indrindra hialana sasatra ary mijery amin'ny hafainganana vitanao, amin'ny zavatra ho an'ny rehetra.
Arezzo ny Livorno Lamasinina
Pisa ho Livorno Lamasinina
Florence ho Livorno Lamasinina
Siena ny Livorno Lamasinina
Toerana eo Florence sy Siena, San Gimignano dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Tuscany. Tsy mirehareha 14 Moyen Âge tilikambo, rarivato mirenireny eny an-dalambe ny manodidina, ary mankafy ny antitra Moyen Âge maritrano ny trano. Izany dia ora iray monja miala Florence.
Florence any San Gimignano Lamasinina
Arezzo any San Gimignano Lamasinina
Pisa any San Gimignano Lamasinina
Lucca any San Gimignano Lamasinina
5. Trips Day By Train From Florence: Bologna
Na dia any ivelany ny Tuscany, ary kely kokoa ny hanatratra pricey (raha tsy te-handray ny tena miadana fiaran-dalamby-paritra), ny fifadian-kanina fiaran-dalamby mitondra anao Bologna in fotsiny ny antsasaky ny ora ny. (Aza adino ny mahazo ny tapakila avy amin'ny Save A Train mazava ho azy!) Bologna dia iray amin'ireo tanàna underrated indrindra tany Italia, ary dia tena tsara hidirana eo amin'ny 10 Trips Day By Train From Florence. Na dia eo aza ny foibe manan-tantara tsara tarehy, sakafo manan-karena kolontsaina, ary mavitrika mbola milamina izany, Matetika no odian-tsy hita ny mpizaha tany ny mahazatra Venise Florence Rome lalana.
Izany no mahamenatra toy ny misy izany zavatra be izany atao, Bologna avy amin'ny fihanihana Moyen Âge tilikambo ho mahafinaritra sakafo Tours, ary manao fototra lehibe ho trandrahana manintona hafa any amin'ny faritra. Izahay nandritra ny herinandro teo tamin'ny Aprily, ary tia ny fifangaroana ny haja sy ny grittiness ary, mazava ho azy, izay rehetra paty matsiro vaovao.
Venice ho Bologna Lamasinina
Florence ho Bologna Lamasinina
Roma ho Bologna Lamasinina
Milan ho Bologna Lamasinina
Nisy tanàna kely any amin'ny faritra tavoahangy, Greve dia miafina amin'ny vatosoa be dia be ny tantara, fomban-drazana, ary betsaka ny divay kolontsaina. Greve tonga lafatra ny andro diany avy any Florence hijery sy fandehandehanana mpanao asa tanana manodidina ny toeram-pivarotana, trano fisotroana kafe, ary fivarotana kafe. Raha mitady ny aina andro, Greve dia mety ho tonga lafatra safidy.
Reggio Emilia ho any Florence Lamasinina
Sestri Levante ho any Roma Lamasinina
Parma ho any Florence Lamasinina
7. Trips Day By Train From Florence: Saturnia
Saturnia Spa dia tanàna ao amin'ny Central Avaratra Tuscany in Italia. Ny toerana tonga lafatra mba Manala sorisory. ny mafana loharano mafana any Saturnia dia loharano solifara eo afovoan'ny lohasaha iray ary fantatry ny toetran'ny fitsaboana azy ireo, manolotra fialan-tsasatra sy fiadanam-po amin'ny alàlan'ny fanitrihana rano amin'ny andro rehetra.
Florence ny Grosseto Fiaran-dalamby
Perugia ny Grosseto Fiaran-dalamby
Viterbo ny Grosseto Fiaran-dalamby
Roma mba Grosseto Fiaran-dalamby
Raha vao nanorina ny Etruscans teo an-tampon'ny havoana iray vita tamin'ny hantsana tufa (lavenona vato volkano). Ny tanànan'i Orvieto miakatra ambony be ny tuff hantsam-bato izay vita amin'ny rindrina fiarovana naorina tamin'ny vato izany atao hoe Tufa. Ny tena manintona izay tsy afaka mandeha tsy hita maso no Duomo toeram-ponenana sy ny Papa. Io tanàna quaint tanteraka ny mivezivezy manodidina sy Nankafizinay koa ny maritrano.
Florence ho Orvieto Lamasinina
Siena ny Orvieto Lamasinina
Arezzo ny Orvieto Lamasinina
Perugia ho Orvieto Lamasinina
9. Trips Day By Train From Florence: Arezzo
Raha ao Florence, satria tia Renaissance kanto, voa ny Arezzo, adiny iray eo ho eo amin'ny fiaran-dalamby izy, ho an'ny hafa fomba fijery. Francesc Piero, izay sarin'ireo ny Duke sy Duchess ny Urbino ny hitanao eo amin'ny Uffizi, voaloko ny trano fiangonana avo amin'ity tanàna ity fiangonan 'i San Francesco. Ny sarotra fresco tsingerin'ny, misolo tena ny Tantara ny Marina Cross, dia iray amin'ireo tena nanan-kery tany am-boalohany Quattrocento, izay ny mpanakanto niasa avy ny maniacal hevitra ny toerana (mifototra amin'ny fomba fijery iray-teboka), mponina amin'ny isa milamina miaraka amin'ny loha atody miendrika atody.
Ny sisa amin'ny tanàna dia manolotra ampy ihany koa ho an'ny fitsidihana antsasaky ny andro (na mihoatra). Raha tia vahoaka, tonga ny faran'ny herinandro voalohany amin'ny volana, rehefa saiky ny tanàna rehetra afovoan lasa goavana fahagola tsena.
Florence ho any Arezzo Lamasinina
Perugia ho Arezzo Lamasinina
Bologna ho Arezzo Lamasinina
Siena ho any Arezzo Lamasinina
Ahoana no ahafahantsika miala intsony eo amin'ny Venice 10 Trips Day By Train From Florence list? Venice dia iray amin'ireo tantaram-pitiavana indrindra sy destinos in Italia. Mampiseho an'arivony lakandrano, lapa, ary tranobe miendrika gothic. Venice dia azo antoka iray amin'ny tanàna tsara tarehy indrindra anao ve ny. Na dia mety ho iray amin'ireo lafo indrindra. Andro iray lavitra dia mety ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha tsy amin'ny mafy teti-bola.
Vonona ny mifidy zavatra sasany eny ny siny lisitry? Manantena izahay fa ny 10 Trips Day By Train From Florence lisitra no nanampy anao tery izany midina. Tadidio fa Save A Train tolotra saran-dalana tsy misy nafenina vola lany, ary afaka boky ao anatin'ny minitra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Trips Day By Train From Florence” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-from-florence%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Modern Art Galleries In Eoropa Ary aiza no ahitana azy ireo
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel UK, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland